Mogadishu Journal » 2017 » October » 10
Mjournal :-Hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doono doorashada ku celiska ah ee madaxtinnimada oo lagu waday inay dhacdo 26-ka October. Odinga ayaa ku baaqay in guddiga doorashada ay ku dhowaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isgaoo...
Tirada codbixiyayaasha Soomaaliland oo la shaaciyay
Mjournal :-Guddiga doorashada maamulka Somaliland ayaa ku dhawaaqay tirada guud ee cod bixiyeyaasha doorashada Madaxtooyada ee dhici doona 13 November. Tirada guud ee cod bixiyeyaasha ayaa gaareysa 704,089, oo ah dadkii qaatay kaararka aqoonsiga ee cod bixiyeyaasha.
Kooxo weerar ka geysatay goor dhaw Jaamacad ku taala dalka Kenya
Mjournal :-Dabley hubeysan ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen dad ku sugnaa Kambaska Jaaamacadda Farsamada (The Technical University of Mombasa) oo ku taalla Deegaanka Xeebta leh ee Kwale. Boliska iyo Goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay 2 haween oo ka tirsanaa...
Mjournal :-Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) uu mas’uul ka ahaa dilka 42 carruur ah sanadkii hore. “Dhibaatooyinka caruurta ee AMISOM ay geysatay waxay asal ahaan ka dhaceen howlgallada looga soo...
Mjournal :-Kulanka furitaankiisa waxaa marti ku ahaa Madaxweyne Sahraawi, Gudgoomiyaha Baarlamaanka ee dalka Chad, Wefdi ka socda Soomaaliya Wasiirka Arrimaha dibadda ee dalka South Afrika iyo marti sharaf kale oo ka kala socday Hay’ado iyo dowlado kale oo caalami ah. Inta uusan...
Mjournal :-Shirka Madaxda maamul goboleedyada oo maalinkii Saddexaad ka socda magaalada Kismaayo ayaa maanta lagu wadaa in la soo gaba gabeeyo, war-murtiyeedna laga soo saaro. Shirka oo soo bilowday Axadii ina dhaaftay ayaa shalay ilaa xalay waxaa socday doodo aad u kulul iyo...